Nezvedu - Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.
Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd.yakavambwa muna 2013, ichinyanya kuita chaiyo muchina zvikamu zvekutsvaga nekusimudzira, kugadzira, kugadzirisa, kugadzira, kugadzira gadziriso. Chigadzirwa chaicho chinovimbiswa, chitarisiko chakanaka, chine kugadzirwa kwakakwana uye hurongwa hwekutarisira mhando, uye yakapfuura ISO9001 uye ISO13485 chitupa chekurapa.
Nepfungwa yekuvandudza, chido chekusika uye mafungiro ekugadzira basa guru, isu tiri kugara tichigadzira mufananidzo watinofanira kuva nawo. Isu tiri nyanzvi mukukanda mhando yepamusoro uye yakakwirira yakawedzerwa kukosha, uye tichigara tichitsvaga kutungamira kwesainzi uye hunyanzvi hutsva.
Chatinoteverera kukunda-kuhwina kubatana. Zvatinoda kuona i win-win situation.
Mune ramangwana, isu tichapa kutamba kwakazara kune kugona kwedu kwakazara, kuzvipira pachedu kuchengetedza kwezvakatipoteredza, uye kuedza kusimudzira pamwe nenharaunda.
II: Kutungamira Iyo Jun Concept:
Tichaita zvatinokwanisa kuti tipe vatengi vedu zvigadzirwa uye masevhisi zviri nani uye zvinonyanya kunaka. Uye yakazvipira kumisikidzwa inoshanda, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, fekitori yemunhu, kugutsikana kwevatengi ndiko kwatinoita nguva dzose!
III. Zvinotungamira Zvakanakira:
Flat, humanized management concept, ine inotungamira midziyo uye tekinoroji, zvakanyanya kukosha, inotungamirwa Jun ine boka remhando yepamusoro, hunyanzvi hwepamusoro, kudzidza kunoramba kuripo uye kufambira mberi, moyo wekambani inotungamira mhuri yeJun, uhwu hunhu hwedu hwave kumberi. yeindasitiri chikonzero chakakosha!
IV. Main kugadzira michina:
Lingjun ine 60 CNC michina, 5 CNC lathes, 5 milling machines, 5 lathes, uye 2 zvigayo mvura saizi dzakasiyana.
Main test equipment: Keens yekuyeresa chiridzwa, Mitsufeng 2-D altimeter, 2-D yekuyeresa chiridzwa, 3-D yekuyeresa chiridzwa, Mitsufeng micrometer, caliper, Angle mutongi, plug gauge, yekuyeresa block uye zvimwe zvakakwirira-chaiyo zviridzwa uye midziyo;
Mechanical professionals: 51 vanhu, kusanganisira kunaka: 15 vanhu, engineering tekinoroji: 8 vanhu, machine master: 28 vanhu (CNC 15 vanhu, milling muchina 5 vanhu, lathe 1 munhu, kugaya muchina 4 vanhu, fitter 3 vanhu)
Chikwata iboka diki revanhu vane chinangwa chakafanana uye kugona kwakasiyana. Ihurongwa hwemaitiro akawanda uye akarongeka. Iri boka revanhu, sezviso zvemunhu, rinoshandira pamwe kuchengetedza kurarama kwemunhu.
Isu tiri timu yehunyanzvi. Isu takazvipira kuvaka zvine simba, kuita kwepamusoro, zvikwata zvekuuraya zvakanyanya kuti tiwane kubatana kwechikwata, kugonesa vanhu mukati mesangano kukudziridza masimba avo uye kugadzira nharaunda nyowani.
Rega hunhu hwevashandi hubatanidzwe netsika nehurongwa hwemakambani;
Rega vashandi vane mufaro, mafungiro ekuonga kune basa ravo pachavo, kubata kambani yavo;
VI. nhoroondo yebudiriro yekambani:
Shenzhen Lingjun Automation Technology Co., Ltd. yakavambwa muShenzhen
Shenzhen Guangming Yutang Factory 1 yakatanga kushanda, zvigadzirwa muOA indasitiri
Zvigadzirwa muindasitiri yemotokari. Akasarudzwa mutengesi weanozivikanwa mota drive shaft.
Shenzhen Longhua yechipiri fekitori yakaiswa mukushanda zvakanaka, iyo R & D centre yakavambwa
Kubva 2017 kusvika 2021
Muna 2017, kambani yakapinda zviri pamutemo munharaunda yekurapa uye yakave yakasarudzika mutengesi wemabhizinesi anozivikanwa ekurapa epamba mugore rimwe chete.
2021 Shenzhen Guangming Shiwei No. 3 Factory operation inotanga
Kutarisa mune Ramangwana (~ 2023)
Iyo kambani yakamisa boka, kuti ive mutungamiri weindasitiri muSouth China uye kunyangwe China, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi pasi rese, uye edza kuve kambani inovimbwa nenyika!
VII. Kambani Kufanirwa uye Chitupa: